Iindaba - Ukusula iintsholongwane
Ubhubhane usaqhubeka. Le yimfazwe apho wonke umntu ethatha inxaxheba kodwa akukho mpu. Ukongeza ekuxhaseni umgca wangaphambili kangangoko banako, abantu abaqhelekileyo kufuneka bazikhusele kwaye bathintele ukosuleleka, bathintele ubhubhane ukuba luzenzekele kubo, kwaye bangabangeli isiphithiphithi.
Okwangoku zintathu iindlela ezaziwayo zosasazo lwebhaktiriya: ulwelo lomlomo, amathontsi kunye nosulelo lokudibana. Ezi zimbini zokuqala zinokuthintelwa ngokufanelekileyo ngokunxiba iimaski kunye neebhegi, kodwa okona kulula ukujongwa kukuhambisa unxibelelwano!
Ukuthintela ukusasazeka ngokungangqalanga kwintsholongwane, ukuhlamba izandla rhoqo, ukubulala iintsholongwane, kunye nokubulala iintsholongwane kwizinto ekufuneka uzichukumisile yeyona ndlela yokhuseleko.
Ngokuka-Academician u-Li Lanjuan, ilungu leqela elikwinqanaba eliphezulu leKhomishini yezeMpilo yeSizwe, i-75% ye-ethanol disinfection inokuziphelisa ngokufanelekileyo iintsholongwane eziphilayo. I-coronavirus entsha iyaboyika utywala kwaye ayimelani kumaqondo obushushu aphezulu.
Ke ngoko, kuyimfuneko ukusebenzisa i-75% yotywala ukubulala iintsholongwane kwiindawo ezifuna ukuchukunyiswa yonke imihla! Kutheni le nto i-75% yoxinzelelo iyimfuneko? Inzululwazi edumileyo:
Kungenxa yokuba uxinzelelo oluphezulu kakhulu lotywala luyakwenza ifilimu ekhuselayo kumphezulu wentsholongwane, ukuyithintela ukuba ingangeni kumzimba webhaktiriya, kwaye kunzima ukubulala intsholongwane.
Ukuba uxinzelelo lotywala luphantsi kakhulu, nangona lungena kwiibhaktheriya, alunakudibanisa iiprotein ezisemzimbeni, kwaye alunakubulala iintsholongwane.
Uvavanyo lubonakalisile ukuba i-75% yotywala inesiphumo esihle, hayi ngaphezulu okanye ngaphantsi!
Yenza umsebenzi we-anti-virus wemihla ngemihla! le ngongoma ibaluleke kakhulu!
Namhlanje, umhleli ucebisa ngemveliso elungileyo yemihla ngemihla yokubulala iintsholongwane kuye wonke umntu——
Ukubulala iintsholongwane kwimiphefumlo equlathe i-75% yotywala.
Oku kusula utywala akunako ukuthintela kuphela i-coronavirus entsha, kodwa kuluncedo nakwintsholongwane ye-pathogenic enje nge-E.coli kunye neCandida albicans!
Ayisebenzisi kuphela i-75% yotywala, kodwa kwanamanzi asetyenzisiweyo anyangwe kaninzi kwaye angacocwa!
NgokweKhomishini yezeMpilo yaseShenzhen, nge-1 kaFebruwari, iZiko leZifo zeSibindi, iSibheno saBantu abaThathu saseShenzhen safumanisa ukuba isitulo sezigulana ezithile ezinenyumoniya esosulelwe luhlobo olutsha lwe-coronavirus kuvavanyiwe intsholongwane ye-coronavirus. Kunokubakho intsholongwane ephilayo kwisitulo somguli.
Ke ngoko, kuya kufuneka unike ingqalelo yosulelo xa usiya kwindlu yangasese. Oku kusula utywala kunokucima ngokufanelekileyo iibhaktheriya ezingenakususwa kwiphepha eliqhelekileyo lendlu yangasese, ekwayindlela yokuthintela!
Ngamanye amagama, ukongeza ekunxibeni iimaski ukuthintela amathontsi, kufuneka silumke ukuba intsholongwane ithi ibhencwe ezandleni, uthambise amehlo, uchole iimpumlo, kwaye uchukumise umlomo ubangele ukosuleleka nokusasazeka.
Ukuba sibuya ngaphandle, nangona sinxibe iimaski, iimpahla zethu kunye neenwele zisenokungcoliseka yile ntsholongwane. Ngexesha lobhubhane, kungcono ukubuya ekhaya. Umzimba uphela unokutshintshwa, uhlanjwe, kunye nazo zonke iintsholongwane.
Ingakumbi izandla zethu, kufuneka sizihlambe izandla zethu rhoqo!
Le yingongoma yabantu abangama-90 ngokulula abangayihoyiyo;
Phakathi kwezindululo ezinikezwe nguMbutho wezeMpilo weHlabathi malunga nokukhuselwa kwe-coronavirus entsha, eyokuqala kukuhlamba izandla.
Okokugqibela, ndinqwenela ukuba umhlaba ubuyele kwangoko kukhuseleko nakwimpilo.